လက်ပံတောင်းတောင်ပြဿနာ ယနေ့ထိပြေလည်မှုမရသည်မှာ မပြတ်ချင်သူများ ရှိနေခြင်းကြောင့်ဟု ဒေါ်အော?? - Yangon Media Group
မုံရွာ၊ မတ် ၈-စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာယနေ့ထိရှည်လျားပြီး မပြီးပြတ်ခြင်းမှာ ကိစ္စမပြတ်ချင်သူများရှိနေခြင်းကြောင့်ဟု နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
မတ် ၈ ရက် မုံရွာမြို့တော် ခန်းမတွင် လူထုတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ် စဉ် လက်ပံတောင်းဒေသခံ ဝက်မှေး ရွာဟောင်းမှ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းက လက်ပံ တောင်းတွင်မြေယာနှင့် အစီရင်ခံ စာ ချိုးဖောက်နေသည့်ကိစ္စများ အား ခြုံငုံတင်ပြရန် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်တောင်း သည့်ကိစ္စပြောဆိုစဉ် နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံက ယင်းကဲ့သို့ပြော ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”တချို့တွေက ညှိနှိုင်းပြီး အ ဖြေရှာလိုက်လို့ ဒီကိစ္စတွေပြတ် သွားတဲ့သူတွေကပြတ်သွားပြီ၊ အခုထက်ထိ မပြတ်သေးတဲ့သူတွေ ကလည်းရှိတယ်။ လက်ပံတောင်း ကိစ္စက ရှည်ပါပြီ၊ ရှည်တာက ဒီကိစ္စကို မပြတ်ချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ပါ၊ အားလုံးကို ဒီကိစ္စပြတ်စေချင်ရင်ပြတ်သွားတာကြာလှပါပြီ၊ပြဿ နာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါ နှစ် ဖက်စလုံးက ပြေလည်ချင်စိတ်ရှိ မှဆိုတာ သတိထားစေချင်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က လက်ပံ တောင်းကြေးနီစီမံကိန်းကို ဒေသခံများကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပြီး သပိတ် စခန်းများ ဖြိုခွင်းခံရစဉ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ကြေးနီစီမံကိန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဦးဆောင်၍ စစ်ဆေးစေခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က တင်သွင်းခဲ့ပြီး စီမံကိန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော် လည်း ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ဆောင် နေသည့် မြန်မာ-ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ နှင့်ဒေသခံများအကြား ဆန္ဒပြမှု များ ယခုချိန်ထိ ဆက်လက်ဖြစ် ပေါ်နေသည်။
”ခုထိ မပြီးပြတ်တာက အ စီရင်ခံစာမှာပါတာက မြေယာ လျော်ကြေးကို ကာလပေါက်ဈေးထက်မနိမ့်တဲ့ဈေးပေးရမယ်ပြောတယ်၊ တစ်ဧကကို ကျပ် ၁၈ သိန်းပဲပေးတာ၊ ကျွန်မတို့က ဘဝနဲ့လဲရမှာ၊ အခုတောင် ကုမ္ပဏီက တစ်ဧက သိန်း ၂ဝဝ နဲ့ စာချုပ်ချုပ်လိုက်ဝယ်နေတာ၊ အစားထိုး မြေယာဧက ၁၉ဝဝ ဖော်ပေးဖို့ ကိုလည်း ရွာနဲ့မိုင် ၄ဝ လောက် ဝေးတဲ့နေရာ ဘာမှစိုက်မရတဲ့နေရာမှာဖော်ပေးတယ်။ စီမံကိန်း ကြောင့်သိမ်းထားတဲ့ပိုလျှံမြေတွေ ပြန်ခွဲလည်းမပေးဘူး”ဟု လက်ပံ တောင်းဒေသခံ တုံတောကျောင်း မှ မစန်းနွဲ့က ပြောသည်။
လူထုတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်သော မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် လက်ပံ တောင်းဒေသခံ တုံတောကျောင်း၊ တုံရွာမ၊တုံအလယ်ရွာ၊မိုးကြိုးပြင် (၃)ရွာ၊ ဆည်တည်းနှင့် ဝက်မှေးရွာမှ ဒေသခံ ၁ဝဝ ခန့်သည် ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမရှိသောဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများအား ဆုးံမပေးရန်၊ အက်စစ်နံ့များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက် စေသည့်ကြေးနီစီမံကိန်းသည် တိုင်းပြည်ကို ကျွန်ဇာတ်သွင်းသော စီမံကိန်းဖြစ်နေသည်၊ စုံ/ကော် အစီရင်ခံစာကို မလိုက်နာသည့် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ပြည်သူ တွေ ဒုက္ခရောက်နေပြီစသည့် ဆိုင်း ဘုတ်များ ကိုင်စွဲတောင်းဆိုခဲ့ကြ သည်။
ပင်နယ်တီပေးလိုက်သည့် ကွင်းလယ်ဒိုင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို နေမာဝေဖန်
မန်းပုဂ္ဂလိက ကျောက်စိမ်းအရောင်းပြပွဲများ အခွန်တိမ်းရှောင်နေ
တရားမဝင် သစ်ခွဲသား တင်လာသည့် ခြောက်ဘီးယာဉ် တစ်စီး ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်ရာမှ လမ်းဘေးမြောင်း?
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရမည့် အလုပ်သမား လေးဆယ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ တရားမဝင် ပို့ဆောင်နေ